Chengetedza nguva yako zvinobudirira ne Multiple Stopwatches yeIOS | IPhone nhau
Chengetedza nguva yako zvinobudirira ne Multiple Stopwatches yeIOS
Zvirokwazvo nhasi nderimwe remazuva chaiwo ayo, pakupera kwemangwanani, kana pakupera kwezuva, iwe uchifunga: "asi zuva rangu rakafamba sei?" Chokwadi, dzimwe nguva "nguva inomhanya" uye isu hatinyatso kuziva izvo zvatakatora.
Na «Multiple Stopwatches» unogona chengeta inoshanda inobata nguva yako, Kuti uzive kuti zvinotora nguva yakareba sei kuita mamwe mabasa, semuenzaniso. Gare gare, unogona kushandisa iro ruzivo kuronga zvirinani mabasa ako, nguva yako, kukoshesa zviitiko. Tarisa uone pazasi.
Sezvo zita rayo rinotikoka kuti tifunge, ne "Multiple Stopwatches" isu tichakwanisa nekukurumidza uye nyore kumutsa akawanda ma simultimeter timers sezvatinoda kuchengetedza inoshanda kutonga kwezvinhu zvakawanda zvehupenyu hwedu hwezuva nezuva, semuenzaniso, nguva yekuwedzera yatinoisa kubasa, nguva yatange tisina kusvuta uye nezvimwe zvakawanda, pamwe nekutsvaga nenzira yakakosha iyo nguva inotitorera isu. kuita mamwe mabasa kuitira kuti tigone kuronga nguva yedu zvirinani.
Uye zvakare, «Multiple Stopwatches» inosanganisa mushandisi interface inoita iyo manejimendi yedu chronometer runyorwa Inokurumidza kufungidzira (kugovera imwe vara kune imwe neimwe yekumira) nenzira yekuti zvese zvaunofanirwa kuita kubata stopwatch kuti umise iyo vamwe vachienderera mberi.
Unoda here tanga wachi inomisa wachikana? Ingobata chiratidzo "+", sarudza vara raunoda, nyora tsananguro pfupi (semuenzaniso, "Rakawedzera basa") uye chengetedza nguva yako. Nekubata kumwe chete iwe unomira uye kana iwe uchida kuitangazve, ingoibata zvakare. Uye kana iwe uchida kutanga mutsva mutsva mukati mewachiwatch, pinda kaviri mumutsara. Nenzira iyi iwe unozogona kunyora yakawedzera yekuwedzera nguva yebasa revhiki, iyo yakazara uye inoshanda nguva yaunotsaura kudzidza, uye zvimwe zvakawanda. Uye kana iwe uchida bvisa stopwatchZvese iwe zvunofanirwa kuita kutsvedza stopwatch kuruboshwe uye sarudza iyo "Delete" sarudzo, sezvatinoita muemail app kana muManotsi.
Uye ikozvino, kana iwe uchimhanyisa, pamwe unogona kuwana "Multiple Stopwatches" pahafu yemutengo, ye € 0,49 chete pane € 1,09 unova iwo mutengo wadzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Chengetedza nguva yako zvinobudirira ne Multiple Stopwatches yeIOS
Kugoverwa kwe iPhone X kuApple Stores kunotanga sezvo kugadzirwa kuri kuramba kuchiwedzera
Mutambi wemitambo yemitambo Razer achaunza smartphone munaNovember 1